1) Dziviriro Yakavanzika
Kuve nechokwadi chekuvanzika kwevashanyi kustonesaudio.nl ibasa rakakosha kwatiri. Ndosaka tichitsanangura mumutemo wedu wekuvanzika ruzivo rwatinounganidza uye mashandisiro atinoita ruzivo urwu.
Nekushandisa ruzivo uye masevhisi pastonesaudio.nl, unobvumirana here nepolicy yedu yekuvanzika uye nemamiriro atakaisa pano.
Kana uchida kugamuchira mamwe mashoko, kana kuva nemibvunzo pamusoro pemutemo wekuvanzika westonesaudio.nl uye kunyanya stonesaudio.nl, unogona kutibata nesu kuburikidza info@stonesaudio.nl
4) Kuongorora maitiro evaenzi
stonesaudio.nl inoshandisa nzira dzakasiyana-siyana kuti uchengetedze kuti ndiani anoshanyira webhusaiti, kuti mushanyi uyu anoita sei pawebhusaiti uye kuti ndeapi mapeji anoshanyirwa. Iyi inzira yakajairika yekushandira mawebhusaiti nekuti inopa ruzivo runobatsira kumhando yeruzivo rwemushandisi. Mashoko isu, kuburikidza nemakuki, Register, inosanganisira IP kero, rudzi rwebrowser nemapeji akashanyirwa.
Isu tinotarisisa zvakare kuti vashanyi vanotanga kushanyira webhusaiti uye kubva kune peji ipi yavanosiya. Isu tinochengeta ruzivo urwu tisingazivikanwe uye haruna kubatanidzwa kune rumwe ruzivo rwemunhu, ruzivo rwakaiswa pawebhusaiti.
5) Kushandisa makuki
stonesaudio.nl inoisa makuki nevashanyi. Isu tinoita izvi kuunganidza ruzivo nezve mapeji anoshanyirwa nevashandisi pawebhusaiti yedu, kuti utarise kuti vashanyi vanodzoka kakawanda sei uye kuona kuti ndeapi mapeji ari kuita zvakanaka pawebhusaiti. Isu tinochengeta zvakare ruzivo rwunogovaniswa nebrowser.
6) Dzima makuki
Iwe unogona kusarudza kudzima makuki. Iwe unoita izvi nekushandisa sarudzo dzebrowser yako. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo nezve idzi sarudzo pawebhusaiti yemupi webrowser yako.
7) Wechitatu Bato Cookies
Zvinogoneka kuti mapato matatu, kufanana negoogle, shambadza pawebhusaiti yedu kana kuti tinoshandisa imwe sevhisi. Mune zvimwe zviitiko, aya echitatu mapato anoisa makuki kune izvi. Aya makuki haagone kufurirwa nestonesaudio.nl.
8) Vashambadziri vedu
Mapato akati wandei anoshambadza pastonesaudio.nl, vese vanoisa makeke avo.
Vashambadziri ava vanoshandisa tekinoroji kumashambadziro avo uye zvinongedzo mumashambadziro avo zvinoonekwa ipapo ipapo nebrowser yako.. Pakati pezvimwe zvinhu, vanoshandisa otomatiki kuziva kero yeIP inotumirwa zvakananga kumushambadzi.
Mapato ese aya ane yavo yekuvanzika mutemo uye anoshandisa iyi yekuvanzika mutemo kushandisa webhusaiti yavo uye masevhisi akabatana. Ruzivo rwakawanda rwekuti mapato aya anobata sei zvakavanzika anogona kuwanikwa pamawebhusaiti emapato aya.
9) Yakavanzika mutemo yevashambadziri/vechitatu mapato
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve zvakavanzika zvevashambadziri vedu uye mapato echitatu ane hukama neiyi webhusaiti, ndapota shanyira mawebhusaiti emapato aya akateerana. stonesaudio.nl haigone kukanganisa aya makuki uye mutemo wekuvanzika wemakuki akaiswa nevechitatu mapato. Aya makuki ari kunze kwechikamu cheiyo yakavanzika mutemo westonesaudio.nl.
10) DART cookie kubva kuGoogle
Kushandisa kweGoogle kuki yeDART, inobvumira kushambadza kuratidzwa pawebhusaiti yedu. Pamusoro pezvo, iyi cookie inoshandiswa kuratidza zviziviso pane mamwe mawebhusaiti. Iwe unogona kusarudza kusashandisa iyo DART Cookie zvakare. Unogona kuzviita nekushanyira webhusaiti inotevera: DART